HERISETRA : Teratany vahiny iray nampihinana maloto ny sakaizany, voasambotry ny Polisy
Mbola manjaka ny famonoana sy tsy fanajana ny zon’ny vehivavy eto amintsika. 5 juillet 2019
Maro ireo lasibatra vokatry ny vono, fampira fesana ary koa fanambaniana amin’ny lafiny rehetra. Ankoatra ny teratany Malagasy, dia fantatra tamin’ny loharanom-baovao hatrany fa betsaka ihany koa ireo vehivavy manambady teratany vahiny no iharan’ny herisetra izay tena amin’ny fomba mahatsiravina. Manaporofo izany ny tranga niseho tamin’ireto mpisakaiza ireto.
Rangahy iray avy ao amin’ny Nosy rahavavy La Réunion no voasambotry ny Polisy, ny 03 jolay 2019 lasa teo noho ny resaka fampijaliana sy fanaovana toetra mamoafady tamina vehivavy teratany Malagasy sakaizany. Taorian’io tranga io dia nitory teny amin’ny Polisy avy hatrany ilay vehivavy niharan’izany ary nilaza fa nampijalian’ny sakaizany. Ity sakaizany ity izay efa niaraka taminy an-taonany maro ary efa nanan-janaka izy ireo.
Tsy vitan’ny vono no mahazo azy fa nasain’ity sakaizany nihinana ny malotony koa ilay vehivavy. Natahotra ny ho faty moa ity vehivavy ity satria nambanany ny antsy ka dia nanao ny nasainy natao tokoa ity farany. Efa maro ny tranga mamoafady azon’ity vehivavy ity saingy efa tafahoatra loatra ny zavatra mahazo azy ka tsy maintsy niafara teny amin’ny Polisy izy. Nosamborina avy hatrany ity teratany vahiny ity ary niaiky ny zavatra nataony rehefa natao ny fanadihadiana lalina momba ny raharaha. Mivezivezy eto Madagasikara sy nosy “ La Réunion” ilay rangahy ary manome vola ilay vehivavy ka nolazain’ity rangahy fa lanin’ilay vehivavy avokoa ny vola no saropiaro amin’ilay vehivavy izy ka dia izao nasainy nanao ny tsy fanao izao.
2019-07-10 11:47:00 par Rasoloniaina
Tsy vanona io rangahy io. Asa izay mety ho nataon’ny polisy réunionnais raha izany no atao ny gasy azy. Tsy fanao olombelona izany. Koa izay fotokevitra izay no tokony hibahana ao an-tsain’ny mpanao famotorana ; fa tsy tokony ho afa-maina io kringy io.
Raha sanatria MALEMY indray ny Gasy eo, dia ho ataon-ny vahiny fanao izao fihetsika mamoafady izao. Ny fahantrantsika moa dia mampihen-danja ny maha-olona antsika mihitsy. Anjaran’ny mpitondra ny mieritreritra !